Wararka - Codsiga caaryada silikoon ee LSR
Liquid silica gel waxaa loo soo gaabiyaa LSR, oo ah wax soo saar ay u roonaan karaan macaamiisha iyo soo saarayaasha. Jellada dareeraha ah ee dareeraha ahi waxay ka samaysan tahay alaabada silica silica. Waxay leedahay dabacsanaan wanaagsan, biyo celin la'aan iyo u adkaysiga qoyaanka, waxayna u adkeysataa aashitada, alkaliska iyo walxaha kale ee kiimikada ah. Guud ahaan waxaa loo isticmaali jiray in lagu beddelo wax soo saarka caagga ah ee maalinlaha ah.
Tikniyoolajiyadda wax taaj oo kale oo caag ah oo silikoon ah (LIM) ayaa ah qaab wax ku ool ah oo wax ku ool ah oo silikoon silikoon ah oo la soo saaray dhammaadkii 1970-yadii. Waxay isku daraysaa waxqabadka wanaagsan ee caag silikoon ah oo leh qalab si sax ah oo xasiloon u dhameystiri kara wax taaj oo kale. Nooca cusub ee la sameeyay ee silikoon caag ah iyo farsamada farsamaynta ayaa u baahan kaliya laba qaybood (oo waliba ay ku jiri karaan qaybo kaabayaal ah sida u dhigma midabka) qalabka, iyo habka ka soo baxa quudinta, cabirka, isku qasida wax taaj oo kale ayaa si otomaatig ah u shaqeynaya. Tiknoolajiyaddan wax lagu shaqeynayo waxay ku guuleysan kartaa ujeeddada fududeynta hawsha, iyadoo la gaabinaayo waqtiga howsha, keydinta qalabka, iyo hagaajinta waxtarka. Asal ahaanna ma jiraan wax qashin ah oo ku saabsan habka wax soo saarka, taas oo faa'iido u leh ilaalinta deegaanka.
Dhammaan nidaamka wax taaj oo kale duray loo qaybiyaa qaybaha soo socda:
Qaybta koowaad waa halbeegga cabirka iyo quudinta, kaas oo si sax ah u cabiraya labada qaybood ee caag silikoon dareere ah si toos ah uga soo baxa foostada baakadka ee nidaamka iyada oo loo marayo saxanka cadaadiska Haydarooliga;
Qaybta labaad waa unug isku dhafan. Labada qaybood ee nidaamka soo gelaya si buuxda ayaa loogu qasan yahay iyada oo loo marayo fiicni ma guurto ah, wax xumbo ahna lama soo gelinayo nidaamka;
Qaybta saddexaad waa unugyada wax ku mudaaya ee duritaanka. Qalabka caagga ah ee silikoon isku dhafan ayaa si tiro ahaan ah loogu duray caaryada iyadoo loo marayo qeybta duritaanka, waxaana si siman loogu qeybiyaa dalool kasta, ka dibna si heer kul kulul ah ayaa loo kala saarayaa. Nidaamka oo dhan si buuxda ayaa otomaatig u ah, mana jiro xakameyn gacanta ah oo lagu ogaan karo ka dib dejinta xuduudaha si loo hagaajiyo wax soo saarka wax soo saarka.
Waxyaabaha xaddidan ee waxtarka wax soo saarka LSR
LSR waxay leedahay faa iidooyin aad u tiro badan, waa inay ku yeelataa rajo aad u ballaadhan suuqa. Laakiin illaa iyo inta laga hadlayo tiknoolajiyadda soo-saaraha hadda, LSR ma ahan saaxiibtinimo, taas oo ku jirta xaddidaadda wax-soo-saarka wax soo saarka. Marka laga hadlayo waxtarka wax soo saarka, waxaad tixraaci kartaa shaxda soo socota. Qaybta A waxay ka kooban tahay kalluumeysiga iyo qaybta B waxaa ku jira wakiilka iskutallaabta. Ka dib markii la isku qaso 1: 1, waxaa lagu durayaa caaryada iyada oo la marsado khaas ah oo lagu nadiifiyo elastomer heerkulka sare, ka dibna lagu daaweeyo caaryada. sameynta.
Caqabadaha waaweyn ee hadda soo food saaray waxaa ka mid ah:
1. Xawaaraha daweynta ee maaddada lafteedu waa 5-8S / mm, taas oo xadideysa wax soo saarka wax taaj oo kale oo ku jira xawaare ka dhakhso badan.
2. Siliconka dareeraha ahi wuxuu leeyahay dheecaan sare intaan la daweyn, waana sahlan tahay in la soo saaro flash inta lagu gudajiro habka wax u sameynta cirbadeynta, taas oo ubaahan shuruudo sare oo ku saabsan saxsanaanta waxqabadka ee caaryada iyo saxsanaanta mashiinka wax lagu duro.
3. Badeecadaha silikoonka dareeraha ahi waa jilicsan yihiin, badeecaduna way ballaadhi doontaa muggeeda inta lagu gudajiro hawsha daaweynta, waxayna ku yaraanaysaa mugga qaboojinta ka dib, taas oo keenta dhibaatooyin waaweyn xagga meelaynta alaabta inta lagu jiro wax soo saarka otomaatiga ah